Nezvedu - Shandong Huashili kushandisa michina Technology Co., Ltd.
Shandong Huashili Automation Technology Co, Ltd. iri muRizhao guta, inonyanya kuita zvine hungwaru girazi kurodha kunyorera uye kucheka zvese-mu-imwe muchina, otomatiki girazi rekucheka muchina, otomatiki NC yakawanda-banga rekucheka muchina, otomatiki girazi rekucheka gungano mutsara, otomatiki girazi kurodha muchina, otomatiki sintered mabwe ekucheka muchina, uye girazi kumucheto kukuya muchina.
Huashili tekinoroji seti yemakanika michina michina yekutsvagisa nekusimudzira, kugadzira, kutengesa mune imwe yeemhando yepamusoro zvigadzirwa zvemabhizinesi. Iyo kambani ine hupfumi hweanogadzira michina yekushandisa michina yekugadzira, yekugadzira kugona, tekinoroji danho uye yakazara simba rehupfumi mune imwechete indasitiri pamberi peiyo indasitiri yekumba, akangwara michina yekutsvagisa michina nekusimudzira, kudzora kwezvinhu, kuita kwemidziyo uye modelling kwave kuri epamba inotungamira nhanho, akati wandei maitiro. ndazadza imba isina chinhu. Iyo yakanaka mushure - yekutengesa sevhisi uye mutengo unonzwisisika, kwenguva yakareba kuhwina kurumbidzwa kwevatengi. Mukuenderana nenheyo ye "kutenda kwakanaka kutanga, kugutsikana kwevatengi", kambani yedu yakagadzika hukama hwekudyidzana kwenguva refu nemabhizinesi mazhinji.
Kambani yedu yekugadzira michina ine hunhu hwehunhu hwakanaka, kukwirisa, nzvimbo diki yepasi, inofambiswa, kushomeka kushoma, kushanda nekukurumidza zvichingodaro, chinova chigadzirwa chakanakira girazi rakadzika kugadzira indasitiri.
Tinokugamuchira nemoyo wese kuti ushanyire uye utaure nesu.
Kubva pamisimboti ye 'kuvimbika kutanga, kugutsikana kwevatengi', kambani yedu yakagadzika hukama hwekudyidzana kwenguva yakareba nemakambani mazhinji. Inopinda muna 2020, kambani yakapinda chirongwa chitsva chemakore mashanu uye iri nhanho imwe padhuze nekuzova ine mukurumbira mhando mu smart indasitiri yekugadzira. Bhizinesi rekambani rakavhurika, hunyanzvi hwetekinoroji hunosimba, manejimendi manejimendi anonatswa, uye mashandiro ebhizinesi akaenzana uye anoshanda. Huashili vanhu vachasangana nemikana mitsva nematambudziko vane pfungwa dzakanaka uye dzakashama. Iyo kambani inogara ichitora shanduko yehunyanzvi mukuita seyakagadzirwa, uye inovavarira hupenyu kubatsira China kusimudzira hupfumi.